Wednesday April 22, 2020 - 10:43:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Sacuudiga ayaa markale soo saartay go'aano ku saabsan tukashada salaadda Taraawiixda marka lagaaro bisha barakaysan ee Ramadaan.
Guddiga Arrimaha Xarameynka ayaa sheegay in Salmaan Bin C/Caziiz oo ah boqorka Aal Sacuud uu ogolaaday in salaadda Taraawiixda lagu dukato labada Masjid ee Xarameynka kuwaas oo ku kala yaal magaalooyinka Makka iyo Madiina.
"Boqor Salmaan Bin C/caziiz wuxuu ogolaaday in salaadda Taraawiixda lagu oogo Xarameynka Shariifeynka ah iyadoo la khafiifiyay lagana dhigay illaa 5 salaama naqsi" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay guddiga arrimaha Xarameynka.
Maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay ayay wakaaladda wararka ufaafisa Sacuudiga waxay sheegtay in gabi ahaanba lamamnuucay in masaajidda Xarameynka lagu tukado salaadda Taraawiixda arrinkaas oo ka caraysiiyay malaayiin muslimiin ah.
inta badan dowladaha maamula wadamada caalamka islaamka ayaa soo saaray go'aano ay ciriiri ku gelinayaan goobaha cibaadada iyagoo ku marmarsiyoonaya ka hor tagga caabuqa Carona Virus ee dadka badan ku laynaya dalal ubadan Yurub iyo Mareykanka.